I-TALE BEHIND DIAMONDS & INHLANHLA YABO - PAMPEREDPEOPLENY.COM - INSYNC
I-Tale Behind Diamonds Nenhlanhla Yabo
Ikhaya I-Insync Cindezela Pulse oi-Denise Ngu UDenise baptiste | Kubuyekezwe: NgoLwesibili, Okthoba 13, 2015, 16:06 [IST]
Abesifazane nedayimane, akukho lutho kulo mhlaba okungahlukanisa ubudlelwano. Kuthiwa leli tshe elibiza kakhulu emhlabeni alinayo inhlanhla ngabambalwa, futhi izizathu ezichazwe ngezansi zingakuthinta ingqondo.
Sonke siyazi ukuthi kunezinkolelo-ze ezingenakubalwa eziye zahlotshaniswa namatshe ayigugu ahlukahlukene phakathi namakhulu eminyaka futhi futhi ziyehluka ngokuya ngezwe nangokwesiko.
ungawanciphisa kanjani amathanga nezinqulu nge-yoga
Isibonelo, idayimane lingelinye lamatshe amaningi ayigugu athathwa njengenhlanhla futhi ngasikhathi sinye enenhlanhla ngabambalwa. Umbuzo uthi amadayimane ahambisana nawo wonke umuntu? Nazi ezinye zezinganekwane ezibalwe ngemuva kwetshe elikhazimulayo, ngamunye wethu afisa empilweni yakhe:
IZIMBANGELA EZINGU-6 UKUTHI IDAYIMANE LINGUMHLOBO OMKHULU WABESIFAZANE
Inkolelo Yamadayimane - Leli tshe livame ukusetshenziselwa izindandatho zokuzibandakanya nezomshado. Kufanele yakhe ukuxhumana phakathi kwabalingani futhi ifake isibindi endodeni nokuziqhenya kowesifazane.
Icala Lenhlanhla - Kuthiwa kabanzi amadayimane angaletha amashwa. Ukugqoka idayimane kungadala ukuwa ebhizinisini, kungaholela ezingozini futhi ezimweni ezingandile idayimane nalo liholela ekufeni.
Ngubani Okufanele Agweme Itshe Elikhazimulayo - Itshe lelo libhekwa njengelinamandla amakhulu. Amadayimane kufanele afakwe kuphela yilabo abawela ngaphansi kophawu lweVirgo neLibra njengoba leli tshe linikeza inhlanhla nokuchuma.
Ngabe Ucabanga Ukuthi Kufanele Ugqoke Idayimane? - Uma itshe likufanela, kuhle futhi, njengoba uzoqala ukubona impilo ekhanyayo nenempilo kungakapheli isonto. Uma itshe lingavumelani nawe, khona-ke izinto ezimbi zizokwenzeka. Ngakho-ke, lapha uphendula umbuzo uma kufanele ugqoke idayimane noma cha. Kuyitshe elihlola impilo yakho.
Uyazi ukuthi Amandla Okuphilisa - Njengoba itshe linamandla amakhulu emvelweni, nakanjani kumele libe neqoqo lezinzuzo zezempilo futhi. Ukugqoka idayimane kungasiza ekubhekaneni nezinkinga zokuzala kwabesilisa nabesifazane.
Yikuphi Idayimane Okufanele Ugqoke - Uma ucabanga ukuthi kunezinhlobo eziningi zedayimane, kungcono ukuthi ukhethe idayimane elicacile futhi elingenakusikwa noma ukuqhekeka.
Isikhathi Esikahle Sokuthenga AmaDayimane - Thenga iDayimane ngoLwesihlanu ngesikhathi seShukla Paksha (umjikelezo wenyanga okhuphukayo). IDayimane nayo ingathengwa lapho i-nakshatra (umlaza) kunguBharani, Purva Phalguni, Purvakshad.
unxantathu wesiphetho sempilo kanye nemigqa yekhanda ekubhalweni kwesandla
iso lakwesobunxele licwayiza ngokufundwa kwezinkanyezi kwabesifazane
isizathu sokushiya umsebenzi ushade
ungayithokozisa kanjani intombazane engxoxweni ye-whatsapp
izinzuzo zokudla ubhanana ekuseni
kanjani ukusebenzisa uwoyela we-castor ekubuyiseni izinwele kabusha
indlela yokunciphisa amafutha esihlathini ngokushesha